Kudzokorora kweYakakurumbira Magetsi Wiricheya Zvigadzirwa
Kune akawanda magetsi wiricheya mhando dzinogona kutengwa pairi kana kunze kwenyika. Nesarudzo dzese dziripo, unosiyanisa sei chimwe chiratidzo kubva kune chimwe? Tsvaga pazasi runyorwa rwewongororo dzeakasiyana mhando uye vagadziri.
Choveround Magetsi Mawiricheya
Iyo Choveround Corporation yakatanga muna Kubvumbi 1992 uye yakave mumwe wevatungamiriri muUS kana kufamba zvishandiso. Ivo vanogadzira, kugadzira, kutengesa uye kuchengetedza zvemunhu kufamba zvishandiso senge bhuku remagetsi uye emagetsi Mawiricheya, magetsi emagetsi uye anosimudza.
Ivo vanoshanda kune yechizvino yekugadzira chirimwa inova ISO 9001 yakasimbiswa yekugadzira, yekugadzira maitiro uye kugovera.
Choveround inopa kufamba midziyo yakanangana nevatengi, makambani einishuwarenzi, zvivakwa zvakavanzika uye zveruzhinji. Ivo vanotarisira zvese zvinoenderana neiyo kufamba zvinodiwa nevatengi vavo, kubva pakuongorora kusvika kunyorero uye inishuwarenzi kubvumidzwa, kudzidziswa, kuendesa uye sevhisi.
Ivo vanoshandisa vanamukoti, rehab tekinoroji vatengesi, varapi pamwe nekubatsira vehunyanzvi hwehunyanzvi kusangana nezvinodiwa nevatengi. Iyo MP4 inofambika zvakanaka ndeimwe yezvigadzirwa zvinozivikanwa zvikuru zveChoveround. Imwe inozivikanwa ndiyo yakasimba Teknique XHD ine 500 lb kugona kwayo.
Mwenga Magetsi wiricheya
Mwenga kufamba mumwe anotungamira mupi we kufamba zvishandiso. Mitsara yavo inozivikanwa inosanganisira iyo Jazzy uye Pride magetsi Mawiricheya ndedzimwe dzinonyanya kufarirwa dziripo.
Iyo Snazzy ndiyo inonyanya kufarirwa magetsi wiricheya mumutsetse uye inonyatso kuzivikanwa neayo patent yepakati-vhiri dhiraivha system iyo inoipa iko kugona kukuru pamwe neyakagadzirwa dhizaini. Ivo vanouya nemarudzi akasiyana uye vanopa kuita kwakasarudzika neyakajairwa inoshanda-track kumiswa.
Izvi zvinobvumira kuungana kuri nyore uye nekukatanura. Idzo mota dzinofambiswa uye dzinomhanyisa kumhanya kwe4 mph uye dzinopa kugona kukuru uye kutonga.
Quantum Rehab 1s huwandu hwe tsika-vakavaka simba kufamba zvishandiso uye masisitimu ekumisikidza seSimba Kukwidza, Simba Kudzikama uye Simba Kujekesa Gumbo zororo.
Simudza zvigaro zvinoitwa kuti zvibatanidzwe nemushongedzo weimba yako uye zvinouya muumbozha, zvinyoro uye zvisina kujairika kusimudza zvitaera.
Personal kufamba Mota (PMVs) dzinogona kufamba kusvika kumamaira makumi maviri neshanu dzisati dzada kudzoreredzwa uye dzakanakira kukwira kwenguva refu, kunyangwe pakuita gorufu.
Simba rinosimudza rakagadzirirwa Mawiricheya ndiyo Hercules 3000 Lift, inova kuungana nekukatanura. Iyo ine inesimba braking system uye inouya nesarudzo yemadocking zvishandiso yakakodzera kune scooter kana Jazzy magetsi wiricheya.